Weeraradii London oo ay ku dhinteen dad gaaray toddobbo ruux | Somaliska
Weerarkii xalay lugu qaaday magaaladda London gaar ahaan dad marayey buundada LondonBridge ayaa waxaa ku dhintay dad gaaray toddobbo qof, in ka badan konton kalena ay ku dhaawacmeen. Booliska ayaa sheegay ineey sadex ruux oo la rusan yahay ineey ka dambeeyeen weerarkaas toogasho lugu dilay.
Arrimahan ayaa biloowday ka dib markii dad dhex lugeeynayey buundada caanka ah ee London Bridige gaari la marsiiyey. Dadkii halkaasi joogay oo argagax iyo anfariir ku dhacay ayaa qaarkood u sheegay saxaafadda uu ineey arkayeen arkay saddex nin oo mindiyo ku hubeysan oo ordaya meel u dhaw buundadaasi. Mid ka mid goobjoogeyaasha oo BBC-da u waramayey waxa uu sheegay in raggaasi mindiyaha ku hubeeysnaa ay dhowr qof wadada marayey ay mindyo ku dhifteen.
Duqa magaaladda London, Sadiq Khan, ayaa waxaa cambaareyey falkaasi isagoo ku tilmaamay mid fulaynimo ah. Wuxuu sheegay mudane Khan in falkaasi aanu aheyn mid qiil loo helayo. Ra’iisalwasaaraha dalkaasi Theresa May, oo saacado ka dib weerarkaas London Bridige ka hadashay ayaa sheegtay in doorashada guud ee dalkaasi ka dhacaysa maalinta khamiista aan loo joojin doonin weerarada koooxaha argagaxisada ah, islamarkaasina aan raali laga noqon doonin falalka qal qalka lugu gelinayo waxa ay ku sheegtay dimoqraadiyada dalkaasi. Waa weerarkii labaad oo muddo gaaban gudaheed lugu qaado dalkaasi. May waxaa ay ku baaqday in dadka dalkaasi ay xoojiyaan midnimada islamarkaasina aaneey fursad siin kooxaha argagaxisada islaaminyiinta ah iyo afkaarahooda xag jirka ah.
Weerarkii xalay ee lala beegsaday dad dul marayey buundada London Bridge ayaa waxaa ku dhintay dad gaaray toddobo ruux, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad ku dhow kontomeeyo ruux. Kooxaha Daacish ayaa la runsan yahay ineey falkaas ka dambeeyeen.
London: Nin xalay saq dhaxe dad masaajid ka soo baxay ku jiiray gaari